Ururka Al-shabaab oo u diyaar-garoobay dagaal ay la gelayaan ciidamada Kenya iyo Ethopia ee Gedo. – Radio Daljir
Agoosto 4, 2013 4:36 b 0
Baardheere, Aug? 4, 2013 – Boqolaal dagaal yahan oo ka tirsan kooxda Al-shabaab ayaa xalayto tababar loogu soo xiray degmada Baardheere ee gobolka Gedo, halkaasi oo bilihii ina dhaafay ay uga socdeen tababaro dhinaca dagaalka ah.
Saqdii dhexe ee xalayto ayaa tababarka la soo xiray sida ay shaaciyeen ururka Al-shabaab, waxaana isla xalayto boqolaal askari oo ka tirsan ururkaasi lagu arkay gudaha magaalada iyagoo hubaysan isla markaasna samaynaya dhoolatus ciidan.
Tirada rasmiga ah ee dagaal-yahanada uu tababarku u soo dhamaaday ilaa hadda lama shaacin, balse saraakiil ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa sheegay in qorshuhu yahay in dhowaan ay kooxdu dagaal la gasho dhinacyada cadowga ah ee ku sugan gobolka sida ay hadalka u dhigeen.
War-bixin la dhigay baraha ku hadla afka Al-shabaab ee Internetka ayaa lagu sheegay in dagaal-yahandan ay diyaar u yihiin in ay la dagaalamaan ciidamada Ethopia iyo kuwa Kenya ee jooga qeybo ka mid ah gobolkaasi, iyagoo taageeraya ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Kooxda Al-shabaab ayaa gacanta ku hayso deegaano badan oo ka tirsan Gedo waxaa ka mid ah magalaada Baardheer oo ku jirta xaruumaha ugu waa weyn ee dalka ee ay ururka joogaan, iyagoo ku soo bandhiga qorshohooda dagaalka ee hadba ay damacsan yihiin.